mpamoaka eTN Juergen Steinmetz dia mahazo ny valin'ny filoham-pirenena SKAL
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Alemana » mpamoaka eTN Juergen Steinmetz dia mahazo ny valin'ny filoham-pirenena SKAL
Oktobra 17, 2020
Miaraka amin'ny fameperana ny fitsangatsanganana sy ny fepetra ara-pahasalamana napetraka noho ny areti-mandringana COVID-19 manerantany, Skål International Sambany amin'ny tantarany no hanatanteraka fivoriambe isan-taona virtoaly amin'ny taona 2020.
Ity fivoriambe nahomby ity dia notarihin'ny filoha Skål International, androany, Peter Morrison, miorina any Nouvelle Zélande, ary moderated ny Jean-François Coté, Skål International Quebec ary mpanolotsaina iraisam-pirenena Skål International Canada.
Juergen Steinmetz, mpanonta eTurboNews dia neken'i Peter Morrisson tamin'ny loka ho an'ny filoham-pirenena. Steinmetz dia mpikambana taloha ao amin'ny SKAL Club any Duesseldorf, Alemana. Nahazo loka i Andrew Wood, SKAL Bangkok Thailand, izay mpandray anjara hatry ny ela eTurboNews. Ny loka fahatelo dia natolotr'i Steve Richter, mpikambana ao amin'ny SKAL Washington, DC, Etazonia.
Hoy i Steinmetz: “Manetry tena aho ary gaga fa nahazo izany fankasitrahana izany avy amin'ny SKAL International. SKAL dia momba ny finamanana ary io no votoatin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Faly aho fa mpikambana tao amin'ny SKAL. Ny maha-mpikambana ahy ao amin'ny Duesseldorf Club zanako dia tena zava-dehibe amiko ary mitazona io fifandraisana ilaina io eo anelanelan'ny tranoko mahafinaritra mandritra ny 32 taona, Honolulu, Hawaii, ary Duesseldorf, Alemana, ilay tanàna tiako, nihalehibe aho ary ho foana koa antsoy mody. Ity mpikambana ao amin'ny SKAL Duesseldorf ity dia mitazona ity fifandraisana ity ho velona. SKAL dia hetsika manerantany, ary faly aho fa anisan'izany. ”
Peter Morrison, filohan'ny tontolo SKAL